Booliska Koonfur Afrika oo helay maydka Ganacsade Somali ah
Home WARARKA Booliska Koonfur Afrika oo helay maydka Ganacsade Somali ah
Capeyown(Berberanews) – Ganacsade Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdullaahi Bootaan Saruurow, ayaa Meydkiisa laga helay meel aan ka fogeeyn Magaalada Brits ee Gobalka North West, ee dalka Koonfur Afrika sida ay Booliska gobalka xaqiijiyeen.
Marxuumka, ayaa saddexdii maalin ee ugu dambeysay lagu weysanaa nolol iyo geeri, Markii cidi ugu wardambaysay waxay aheyd Khamiistii (1-7-2021) isagoo watay gaadhi uu alaabaha ku wareejin jiray abbaare 8:00pm Subaxnimo Magaalada Brits.
“Meydka Walaalkeen waxaa soo sheegay Nin Hindi ah oo gaadhiga uu watay meel kus oo arkay, markii la dabagalayna Booliska ayaa Meydka heley isagoo Xabado ku yaalaan…. allaha u Naxariisto dabcan gacan ka xaqdaran ayaa nafta u qoonsatay oo ay muuqato in dhac loo gaysanayay” ayuu yidhi Cabdalla oo Adeer u ah Marxuum Cabdullahi Bootaan.
Ciidamo ka tirsan Booliska, ayaa maalmihii ugu dambeeyay baadi goobayay Muwaadinkan la waaysanaa kadib markii lagu wargeliyay maqnaanshihiisa.
Booliska Koonfur Afrika
maydka Ganacsade Somali ah
Previous articleMaxay tahay caqabadda laydhka Berbera?
Next articleWeerarka Turkigu la kulmi doono ka hor 2023